ထိုင်းက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ပြန်ပို့ဖို့ စီစဉ် - BBC Burmese - မြန်မာ့ရေးရာ
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန် 17 ဇန်နဝါရီလ 2013 - 00:59 GMT
ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ စုနှစ်တွေအတွင်း မြန်မာပြည်ဘက် စစ်ပွဲဖြစ်တိုင်း ဒုက္ခသည်တွေ ထိုင်းဘက် ထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
ထိုင်း မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေကို ၂ နှစ် အတွင်း နေရပ်ရင်း ပြန်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ထိုင်းပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ တာခ် ခရိုင်၊ ထာ့ဆောင်းယန် မြို့နယ်ထဲက မဲလဒုက္ခသည် စခန်းကို လာရောက် ကြည့်ရှုစဉ် ထိုင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီး နိုင်ကျာရုဖုန် ရေယန်ဆုဝမ်က ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဟာ ထိုင်း၊ မြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာဒုက္ခသည် စခန်းတွေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့ ထိုင်းတာဝန် ရှိသူတွေ၊ နိုင်ငံတကာ အင်ဂျီအိုတွေနဲ့လည်း မဲလဒုက္ခသည် စခန်းမှာ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။
ထိုင်းဘက်က အရင်ကတည်းက ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ပို့ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ပြောခဲ့ပေမယ့် လက်တွေ မဖြစ်ခဲ့ပဲ အခုအခါမှာတော့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် သူတို့ကို ပြန်ပို့ဖို့ ပိုပြီး ဆန္ဒရှိနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဇွန်လက မဲလစခန်းကို သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အာဆီယံအတွင်း လွတ်လပ်စွာ ကုန်သွယ်ရေး၊ လွတ်လပ်စွာ အလုပ်သမားတွေ ရွှေ့ပြောင်း သွားလာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရေး စတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးတော့မှာ မို့လို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းအတွင်းမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသား ဒုက္ခသည်တွေကို နေရပ်ရင်း ပြန်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ ဝန်ကြီးက သတင်းထောက် တွေကို ပြောပါတယ်။
''နေရပ်ရင်းပြန်မယ့် ဒုက္ခသည်တွေ ကိစ္စကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း ဖြစ် မှာပါ။ ပြီးတော့ နေရပ်ရင်း ပြန်မယ်သူတွေဟာ အရည်ချင်းရှိသူတွေဖြစ်အောင် ပညာရေးကိုအဓိက ဆောင်ရွက်ထားတယ်။ သူတို့ဟာ လူမှု ပတ်၀န်းကျင် အတွက် ဝန်ထုတ်၀န်ပိုး မဖြစ်စေရ အောင်လည်း၊ သူတို့ကို သက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာတွေကို ပို့ချပေးထားတယ်'' လို့ ဝန်ကြီးက ပြောပါတယ်။
ထိုင်းက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဒုက္ခသည်တွေ သိန်းနဲ့ချီပြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအတွင်း အများစုက တိုက်ပွဲတွေကြောင့် စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်ရှိလာသလို တချို့က နိုင်ငံရေး ဒုက္ခသည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေ ဆန္ဒကို စစ်တမ်းကောက်ယူရာမှာတော့ ၆ % ပဲ နေရပ်ရင်း ပြန်ချင်ကြောင်း၊ ၆၁.၅၁ % က တတိယ နိုင်ငံတွေကို သွားပြီး အခြေချ ချင်ကြတယ်၊ ၃၇. ၃၁ % ထိုင်းနိုင်ငံမှာ နေလိုကြပြီးတော့ ၀. ၄ % ဝေခွဲမရသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့ စစ်တမ်း ကောက်ထားတဲ့ ထာ့ဆောင်းယန်မြို့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြည်ထဲရေး၀န်ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးပွဲမှာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
နေရပ်ရင်း ပြန်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်း အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ ပရုပ်ဆီ၊ ဖယောင်းတိုင်၊ အမွှေးတိုင်နဲ့ ဆပ်ပြာချက် လုပ်နည်းတွေကို သင်တန်းပို့ချ ပေးထားတယ်လို့ ကိုးဝါးလို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ အင်ဂျီအိုတခုက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော်ရေးမှာ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရအပြင် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာ မင်းကြီးရုံးတို့ သုံးပွင့်ဆိုင် ညှိုနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ဖို့ အများကြီး လိုနေသေးသလို ဒီဒုက္ခသည်တွေကို နေရာချ ထားပေးမယ့် အိုးအိမ်တွေ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာတွေကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် ဝန်ကြီးပြောတဲ့ အချိန်ထက် ပိုကြာ သွားနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်သူများ အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ IOM လို့ခေါ်တဲ့ အင်ဂျီအို တာဝန်ရှိသူ Mr Pierre King က ထောက်ပြပါတယ်။
ထိုင်း​နယ်စပ်​က မြန်​မာ့ ဒုက္ခ​သည်​အရေး